मोडेल 111: यो के को लागी हो | आर्थिक वित्त
मोडेल 111: यो के को लागी हो?
एनकर्नी आर्कोया | 01/11/2021 15:45 | अद्यावधिक गरियो 01/11/2021 15:51 | उद्यमीहरू
कर एजेन्सीमा भर्नका लागि धेरै प्रकारका फारमहरू छन्। एक व्यक्तिले ती सबै जान्न आवश्यक छैन, जस्तै यो कम्पनीहरू, फ्रीलान्सरहरूसँग हुन्छ ... तर प्रत्येकले केहीसँग मेल खान्छ। यस अवस्थामा मोडेल १११, तपाईलाई यो केका लागि हो भनेर मात्र थाहा छैन, तर कसले भर्नुपर्छ र यसमा के समावेश छ।
तपाईं 111 मोडेल बारे सबै जान्न चाहनुहुन्छ? तपाईलाई यस फारमको बारेमा जान्न आवश्यक सबै कुराको लागि गाइड पत्ता लगाउनुहोस्: यो के हो, यो के हो, कसलाई बाध्य छ ...
1 मोडेल। 111 ० के हो?
2 111 मोडेल को लागी के हो?
3 पेश गर्न को बाध्य छ
4 कसरी फारम 111 फाइल गर्ने
4.1 फारम 111 भर्नुहोस्
5 यो कहिले भुक्तान गरिन्छ र यदि यो छैन भने के हुन्छ
मोडेल। 111 ० के हो?
मोडेल १११ ले जनाउँछ त्रैमासिक विवरण जो कामदारहरू, पेशेवरहरू वा उद्यमीहरूलाई लागू हुने व्यक्तिगत आयकरको खातामा रोक्का र आम्दानीको हुनुपर्छ। अर्थात्, तपाईंले त्यो त्रैमासिकमा व्यक्तिगत आयकरको खातामा के रोक्का र आम्दानी घोषणा गर्नुपर्छ। त्यसकारण, हामी एक कागजातको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन वर्षमा चार पटक प्रस्तुत गरिनु पर्छ, भले पनि यो शून्यमा जान्छ (अर्थात, त्यहाँ कुनै रोक वा नकारात्मक परिणामहरू छैनन्)।
111 मोडेल को लागी के हो?
मोडेल 111 को प्रकार्य आधारभूत छ, यसमा समावेश छ कामदारहरूको तलबमा लागू हुने रोक्काहरूलाई आत्म-तरल पार्ने, तर पेशेवरहरूलाई इनभ्वाइसहरू, पुरस्कारहरू, पूँजीगत लाभ र अन्तमा, आम्दानीको अभियोग।
त्यसकारण जसले यसलाई भर्न बाध्य छन् ती कम्पनीहरू र स्व-रोजगारी हुन्।
पेश गर्न को बाध्य छ
सामान्यतया, सत्य यो हो कि मोडेल 111aहो प्रत्येक कम्पनी र व्यक्तिगत स्व-रोजगारको लागि अनिवार्य कागजात। तर त्यसो गर्नको लागि, एक आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ: त्यो रकम कम्तिमा निम्न अवस्थाहरू मध्ये एउटामा छुट दिइएको छ:
कामबाट आम्दानी हुन्छ । तिनीहरू, उदाहरणका लागि, पेरोल वा बस्तीहरू हुन्।
आर्थिक र व्यावसायिक, कृषि, वन, पशुपालन, व्यवसायिक गतिविधिहरूमा जुन बौद्धिक वा औद्योगिक सम्पत्तिको 1% कायम गर्न आवश्यक छ।
सार्वजनिक वनमा वन उपयोगको पैतृक लाभ।
खेल वा प्रतियोगिताबाट प्राप्त पुरस्कारहरूको लागि।
र अरूहरू जसमा छवि अधिकारहरूको स्थानान्तरण समावेश छ वा तिनीहरूमा विशेष व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यदि यी मध्ये कुनै कारण उत्पन्न भयो भने, स्व-रोजगार व्यक्ति वा कम्पनी त्रैमासिक आधारमा फारम 111 पेश गर्न बाध्य हुनेछ। अन्यथा, तपाईंले यसलाई पेश गर्नुपर्दैन र अन्य प्रकारका फारमहरूमा मात्र बाध्य हुनेछ।
कसरी फारम 111 फाइल गर्ने
यदि तपाईं स्व-रोजगार वा एक कम्पनी हुनुहुन्छ जुन फारम 111 प्रस्तुत गर्न बाध्य छ, तब तपाईंले थाहा पाउनु पर्छ कि यो त्रैमासिकको अन्त्यबाट 20 क्यालेन्डर दिन भित्र सधैं भुक्तान गर्नुपर्छ। अर्थात्, यो अप्रिल १ देखि २०, जुलाई, अक्टोबर र जनवरीसम्म भ्याट वा व्यक्तिगत आयकर फारमहरू पेश गर्नुपर्ने भएमा एकै समयमा हुनेछ।
र यो कसरी गर्ने हो? केहि समय पछि हामी तपाईंलाई भर्न मद्दत गर्नेछौं, तर प्रस्तुतीकरण, जुन हामी अहिले फोकस गर्न चाहन्छौं, दुई फरक तरिकामा गरिन्छ:
व्यक्तिगत - रुपमा।
अहिले, स्वरोजगारहरूले यी दुई मार्गहरू बीच छनौट गर्न सक्छन्; यद्यपि, कम्पनीहरूको मामलामा, ट्रेजरीले यो विशेष रूपमा अनलाइन हुन आवश्यक छ।
फारम 111 भर्नुहोस्
फारम 111 भर्नु धेरै रहस्यमय छैन, किनकि यो गर्न सजिलो छ। पहिलो कुरा पहिचान हुनेछ, त्यो हो, यो फारम प्रस्तुत गर्न गइरहेको कम्पनी वा स्व-रोजगार व्यक्तिको डाटा निर्धारण गर्न। पनि तपाईंले क्यालेन्डर वर्ष र प्रस्तुतीकरणलाई सन्दर्भ गर्ने त्रैमासिक निर्दिष्ट गर्नुपर्छ।
त्यसपछि कामबाट आम्दानी हुने ब्यबस्थापन हुनेछ। के लगाउने ? ठिक छ, तपाईंले प्राप्तकर्ताहरूको संख्या, ती सबैको कुल रकम, साथै रोकहरू निर्धारण गर्नुपर्नेछ। निस्सन्देह, तपाईंले मौद्रिक भागबाट प्रकारको भाग फरक गर्नुपर्छ।
अर्को चरण आर्थिक गतिविधिहरूको प्रदर्शन हुनेछ, जुन अघिल्लो एक जस्तै गरिन्छ, त्यो हो, कति प्राप्तकर्ताहरू छन्, कुल रकम, रोक्का र दुई (नगद र प्रकार) बीचको भिन्नता निर्धारण गर्ने।
El प्रतियोगिताहरू, र्याफलहरू, खेलहरूको लागि पुरस्कार बिन्दु ... तपाईंले भाग लिनुभयो भने मात्र भरिन्छ। पछि हामीले सार्वजनिक वनमा छिमेकीहरूको वन शोषणबाट प्राप्त पुँजीगत लाभ पाउनेछौं। यदि त्यहाँ छ भने, यो भरिएको छ, र यदि छैन भने, यो खाली छोडिन्छ। छवि अधिकारहरूको स्थानान्तरणको लागि विचारको लागि समान: कर कानूनको लेख 92.8 मा प्रदान गरिएको खातामा भुक्तानीहरू।
यी सबैले हामीलाई पूर्ण समाधान दिन्छ। अब, यो मामला हुन सक्छ कि यो एक पूरक कथन हो, वा परिणाम भुक्तान गरिएको छ वा नकारात्मक (त्यो शून्य हुनेछ)।
यदि यो भुक्तान गर्न बाहिर जान्छ भने, तपाईंले यसलाई अन्तमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुन बैंकसँग प्रक्रिया गर्नुपर्छ।
यो कहिले भुक्तान गरिन्छ र यदि यो छैन भने के हुन्छ
यदि तपाईंले मोडेल 111 प्रस्तुत गर्नुभएको छैन भन्ने महसुस गर्नुभयो भने, तपाईं समस्यामा पर्नुहुनेछ। तपाईंले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा यो प्रस्तुत गर्नु हो, समयसीमा पछि पनि। किन? ठिक छ, किनभने यदि तपाईंले (कोषले यो महसुस गर्दैन भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ) र कर एजेन्सीले यो महसुस गर्नुभयो भने, तपाईंले 200 यूरोदेखि दायरा हुन सक्ने दण्डको सामना गर्नुपर्नेछ।
सामान्य कर कानूनको दफा १९८ अनुसार आम्दानी बिना विवरण पेश नगर्ने व्यक्तिले उल्लङ्घन गरेमा थोरै भए पनि २०० युरो जरिवाना हुनेछ । अब, यदि विवरण आय संग छ भने, यो अधिक हुन सक्छ।
म्याद सकिएपछि पनि प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर हामीले किन भनेका छौं? किनभने तब ट्रेजरीले महसुस गर्नेछ कि तपाईको तर्फबाट कुनै नराम्रो विश्वास भएको छैन, तर तपाईले सच्याउने प्रयास गरिरहनुभएको गल्ती भएको छ। मबाट जरिवाना खोसिएको हो भन्न खोजेको हो ? होइन, तर हो त्यो तपाईं यसलाई 50% सम्म घटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हो, 200 यूरो तिर्नको सट्टा, तपाईंले 100 तिर्नु हुनेछ। र, यसबाहेक, यदि तपाईंले तिनीहरूद्वारा स्थापित अवधि भित्र भुक्तानी गर्नुभयो भने, 100 यूरो तिर्नुको सट्टा, तिनीहरूले तपाईंलाई 25% छुट दिनेछन्, अर्थात्, तपाईंले तिर्नुहुनेछ। 75 यूरो।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, फारम 111 हुनुको कारण छ, तर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पक्षहरू पनि छन्, जस्तै यसलाई कसरी सही रूपमा भर्ने भनेर जान्नु, यदि तपाइँ यसलाई प्रस्तुत गर्नु पर्छ भनेर जान्नु र त्यसो नगर्नुको नतिजाहरू जान्न। यदि तपाईंसँग ट्रेजरीबाट यस फारमको बारेमा थप प्रश्नहरू छन् भने, तपाईंले हामीलाई भन्नुपर्छ र हामी तपाईंलाई सहयोग गर्ने प्रयास गर्नेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » उद्यमीहरू » मोडेल 111: यो के को लागी हो?
वाणिज्य रजिस्ट्री के हो